कुन अक्षरको व्यक्तिको स्वभाव कस्तो ? जान्नुहोस् !! – rastriyakhabar.com
कुन अक्षरको व्यक्तिको स्वभाव कस्तो ? जान्नुहोस् !!
एजेन्सी । प्राय मानिस आफ्नो नाम सधै प्यारो मान्‍ने गरिन्छ।उनीहरु आफ्नो नामको अक्षरलाई समेत बढी बढावा दिने गरेका छन्। प्राचीन कालमा पनि मानिसले नामकैको कारणबाट चुनौतीपूर्ण कार्य गर्दै आएको छ।
तर संसारमा ज्योतिष बिज्ञानले मानिसको नामबाट मनोबिज्ञान पढ्ने पद्धतिको विकास गरिसकेको छ। मानिसले अब आफ्नो नामको अक्षरबाट स्वभाव थाहा पाउन सक्छन्। ती सबै विकास मानिसको सुरुवातको अक्षरको नामबाट नै हुने गरेका छन्। कुन व्यक्तिको कस्तो चरित्र हुन्छ अक्षर अनुसार यस प्रकार व्याख्या गरिएको छ।
दे दो च ची : सदाचारी, बिद्धान, साहसी, निरंकुश, लोकप्रिय, निष्ठावान, श्रद्धालु भक्तजन, निर्दयी, क्षमावान, पत्नीभक्त, बिद्धान स्वभाव खालको स्वभाव हुन्छन्। (एजेन्सीको सहयोगमा)